WWE ngano Jerry Lawler anokurukura hupenyu hwake chaihwo naMichael Cole - Wwe
WWE ngano inokurukura hupenyu hwake chaihwo naMichael Cole
WWE ngano Jerry Lawler aburitsa pachena kuti aive neruvengo naMichael Cole mumakore akatungamira kumutambo wavo weWrestleMania XXVII.
Muna 2011, Lawler akafunga kuti akunda waaitaura naye mumutambo wepamusoro weWrestleMania waisanganisira Steve Austin semurengeti wevashanyi. Nekudaro, mhedzisiro yakaparadzwa neasina kuzivikanwa RAW General Manager, zvichireva kuti Cole akakunda kuburikidza nekusafanira.
Lawler akafunga pamutambo pane ino svondo chiitiko cheWWE show Bump . Akasimbisa iye naCole chaizvo vaive nenyaya kumashure kwezviitiko pamusoro pemakore gumi apfuura.
Ndaiziva kuti paive neruvengo kana chero chinhu pakati paMichael Cole neni kubva panguva yekutanga yandakasangana naye, kekutanga nguva yandakabata maoko naMichael Cole. Isu takanga tisingambove pane imwechete peji. Kunyangwe hazvo isu takashanda pamwe chete kwemakore akawanda kudaro, padivi nepadivi, ini ndaigara ndichinzwa chidiki chekukonzera ruvengo ipapo kuna Michael. Ipapo yakazongodurura pamusoro [ndokuva rondedzero].
Welcome to #WWheheBump , @JerryLawler ! pic.twitter.com/5GzgZP1F51
- WWE's The Bump (@WWETheBump) Kurume 31, 2021
Kunyangwe akarasikirwa paWrestleMania, Jerry Lawler akazopedzisira akunda kukwikwidza kwake naMichael Cole. Iyo WWE Horo yeN Famer ya2007 yakaenderera mberi nekukunda Cole muKiss Yangu tsoka kudzokazve paWWE Pamusoro peMuganhu 2011.
Jerry Lawler naMichael Cole ishamwari dzakanaka izvozvi
Michael Cole akapfeka yero yeorenji inopesana naJerry Lawler
Michael Cole akapawo hurukuro pfupi paThe Bump nezve rake rakakurumbira mutambo naJerry Lawler. WWE SmackDown mushamarari akasimbisa iye naLawler vaenderera mberi nekuumba hushamwari.
Zvaishamisa. Ini naJerry tinodzokera kumashure makore mazhinji, mazhinji. Akanga ari wangu wekutanga kushambadzira mudiwa paSmackDown. Ini naJerry takagadzira hukama hunoshamisa pamusoro pemakore uye tave shamwari chaidzo.
TINOGONA KUVA NENYAYA YAKO FUNGA?
Tichangobva kugamuchira meseji kubva @MichaelCole on #WWheheBump ! pic.twitter.com/Yxp5z1gdVP
Cole akawedzera kuti yaive rukudzo rukuru pane [rake] basa rekutarisana nemushamarari akadaro pachiitiko chikuru cheWWE chegore.
Ndokumbirawo utipe chikwereti The Bump uye upe H / T kune Sportskeeda Wrestling kana iwe ukashandisa makotesheni kubva kuchinyorwa chino.
brock lesnar zhizha slam 2014
ndiani trisha yearwood akaroora
unorarama sei panguva yacho
zviratidzo zvekuti haachisiri mamuri
chii chinonzi kuremekedza uye nei chakakosha
anonditarisa nguva dzose
sei mick foley akarasa nzeve